Bara Abdii Mohaammad gara Teklaay Haagositti jijjiiramerra geenyeerra!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBara Abdii Mohaammad gara Teklaay Haagositti jijjiiramerra geenyeerra!!
Bara Abdii Mohaammad gara Teklaay Haagositti jijjiiramerra geenyeerra!!
Teklaay Haagos kun waggaa meeqa dura Tigraay irraa dirqama fudhatee Oromiyaa dhufe?
Guutuu Oromiyaa keessa naannayaa turewoo!
Awwaluu Abdii fi Abiyoot Ayyalee koollejjii hololaa seenaatu xiqqishumallee leenjii fudhadhaa mee. Waan fafakkaachuu danda’u yoo dhabdan dirqama holola hin dhiistan jechuudhaa?
#Waan hedduu nama qaanfachiisuu dha.
Maatiin Qondaala Badhaadhinaa Obbo Awwaluu Abdii fi Maatiin Dargaggoo Abduu Muhaammad Obbo Awwaluun Tigree gochuun #Teklaay #Haagos godhan idoon jireenyaa isaanii Kibba Baha Oromiyaa Roobee Baalee fi Gadab Hasaasaati.
Warri kun warra Bunaa Killaati. Obbo Awwaluun Obboleessa isaa Quxusuu akkamitti Oromummaa irraa mulqee Tigree akka godhe nama dhiba. Isa kana maatiin lamaan wal gaafachuu qabu.
Bara Abdii Mohaammad gara Teklaay Haagositti jijjiiramerra geenyeerra.
Maali kijibuma xiqqoo dhugaa fakkaachuu yaalullee hin fayyadamanii?
#balaa_boombii baga rabbi isin baase oromoo koo!
Gurbaan miseensa liyyuu haylii Tigiraay ta’e kun irreecha irratti alaabaa ABO uffatee osoo boombii dhoosuuf deemuu quxuxxurii poolisii addisaabaqa jala gale jedhan.
uummanni Oromoo kana booddee waanti inni eegu hin jiraatu qabsoo isaa haala adda ta’een,tooftaa kan dura hin barataminiin,qabsaa’onni haala adda ta’een keessaa fi alaan tokkummaan harka walqabatanii yeroo dhumaatiif qabsoo bilisooman malee hin goolabamne eegaluudha! Qophaa’i Oromoo!
Ani Jiraataa magaalaa finfiinneeti iddoon jireenyakoo gara CMC ti gana barii gara sa’a 10:00 hiriyoota koo wajjin gara irreechaa deemuu yeroo daandii buunu waraanni meeshaa gurguddaa qabatanii jiran eecha akka deemnu nugaafatan akka irreecha deemnu itti himne baajii nugaafatan hin qabnu jenneen deebi’a nuun jedhan tole jennee karaa biraas yaalle innis akkasuma ta’e tole jennee ijoollee hiriyoota keenya kutaa magaalaa hunda keessa jiran quunnamuu yaalle isaanis ugguramanii akka jiran odeeffannoo nuuf kennan ! kana fakkaata do’iin abiyyi ilmaan oromoo irratti dalage!!
Biyyaa Itoophiyaa Jedhamtu Keessa Mootummaan Seeran Filames Seerris Hin jiru Guutu Biyyatti keessatti Waraanni Ummata Goolaa Jira.